Wasiirka Caafimaadka oo ka warbixisay xaaladihii ugu dambeeyay COVID-19 ee Dalka | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Muqdisho (SONNA)-Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa warbixinta maalinlaha ah ee xogta Feyruska Karoona ku sheegtay in la diiwaan geliyay 164 xaalado cusub oo COVID-19 ah 48-kii saac ee la soo dhaafay, 15 qof ayaa u geeriyootay, waxaana ka bogsatay 71 ruux.
Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa caddeysay in xaaladaha cusub laga diiwaan geliyay Somaliland (73), Puntland (59), gobalka Banaadir (27), Jubbaland (4) iyo Koonfur Galbeed (1) qof ah, 91 ka mid ah bukaannada la xaqiijiyay waa rag, halka 73-na ay yihiin haween.
Tirada xaaladaha COVID-19 ee dalka laga diiwaan geliyay ayaa gaartay 17,630 waxaa bogsootay 8,604 Ruux. guud ahaan 992 ruux oo kale ayaa u geeriyootay Cudurka.
Previous articleRa’iisul Wasaare ku-xigeenka XFS oo Guddoomiyey shirka Golaha Wasiirrada “Sawirro”
Next articleHey’adda Nabad sugida Iyo Sirdoonka Qaranka ayaa war ka soo saaray xubin ka tirsaneed hey’adda oo muddo la weysanaa.